WENA Wawungenzenjani: Isigebengu sendoda, kumnandi ukuhefuzela phezukwami? | isiZulu
WENA Wawungenzenjani: Isigebengu sendoda, kumnandi ukuhefuzela phezukwami?
Abakhangisi bengqephu benze ucansi okwangempela esikhangisweni
Isigcinwe endaweni ephephile ingane 'ebilalwa ngunina'
Owesifazane udlise umyeni ebulawa umona wocansi lwenkosikazi yesibili
Ngemvume yakho, ngicela ningilekelela nabafundi ngale nkinga engibhekene nayo.
Nali isoka ngihlangana nalo, hhay impela ubhuti osekhulile, uhloniphekile, ugqoka kahle uyamubona nje ukuthi unezimali zakhe. Sisaqala ukwazana, hhayi bekumnandi angikhathali, ufona njalo, uyeza azongibona kuhle nje name ngaze ngaba nethemba lokuthi sizobambisana kahle.
Hawu, nansi inkinga sengiyinothisa, leli soka lami, sekuphele izinyanga cishe eziyisithupha sithandana. Lifika njalo efulethini lami.
Uma lifika-nje kugitshelwa embhedweni, iyasho inkonzo, lihambe. Sengiyalibuza ngelinye ilanga ukuthi lizimiseleni ngempela ngoba, alikazi lifike liphethe ngisho upulasitiki wakwaChester, ngisho i2l kadilinki.
OLUNYE UDABA:UMBONO: 'Yeka izinyembezi zethu sikhalela isigebengu somfazi'
Lithi alinamali, sengiyabuza-ke imali awunayo kodwa amandla okulokhu uzohefuzela phezukwami nsuku zonke wona unawo?
Inkinga yami wukuthi ngiyabona ukuthi lidlala ngami, uma ngilitshela ukuthi lingasezi lapha endlini angisafuni ukuthinde ngilibona, livele lingitshele ukuthi ngiyasangana, bese liyaqhubeka lifike ngenkani. Angisazi ngempela ukuthi ngingalivimba kanjani ngoba sengikhathele wumuntu ongikhumbula uma efuna ucansi kodwa uhluleka ukucabanga ukuthi njengomuntu wesimame nginezidingo okumele azifeze njengesthandwa sami.
WENA WAWUNGENZENJANI: Umakhelwane bamnuka ngokuthakatha
Ezinye izindaba... Wena Wawungenzenjani...
Wena Wawungenzenjani: Umfowethu ubonakale ephuthaza ingane kamzala
Umshana wami ubevakashile ngalawa maholidi njengoba bengidinga umuntu ozosala nezingane ngoba kangivalanga emsebenzini.
Wena Wawungenzenjani: Isoka lami lithi lihleli nami ngoba ngisebenza kahle
Mina nesoka lami leminyaka emithathu, sizoshada ezinyangeni eziyisithupha ezizayo, kodwa sengididekile ngemuva kokuthola imfihlo ngaye.